Aabbe Soomaaliyeed oo war murugo leh ka sheegay qaxootigii lagu laayay Yemen
Home » WARARKA MAANTA » Aabbe Soomaaliyeed oo war murugo leh ka sheegay qaxootigii lagu laayay Yemen	Aabbe Soomaaliyeed oo war murugo leh ka sheegay qaxootigii lagu laayay Yemen
19/03/2017	1,026 Views Cumar Darroor, oo ah aabbe ay gabadhiisu ku jirtay qaxootigii Soomaaliyeed ee lagu laayay duqeyn ka dhacday Yemen, ayaa waxa uu markii ugu horreysay ka warramay geerida gabadhiisa, iyo falka duqeynta ah ee dhacay.
Isaga oo ku sugan gobalka Sool ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in warka ku saabsan geerida gabadhiisa uu ka helay gabar kale oo iyaduna ku dhaawacatay duqeynta lala beegsaday qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugnaa Yemen.
Waxa uu sheegay in gabadhiisa oo magaceedu ahaa Xafsa ay marka ay geeriyoonaysay saddex bilood ka sii maqnayd dalka, iyada oo u baxday socdaal tahriib ah oo ay nolol ku raadinayso.
Mar uu ka hadlayay sida uu u arko dilka gabadhiisa, ayaa waxa uu Cumar cambaareeyay duqeynta loo geystay dadka ay gabadhiisa ku jirtay, oo uu sheegay in ay ahaayeen dad markii horeba u bareeray geeri kaga imaan kartay socdaalkooda tahriibka ah, hase ahaatee ay arxandarro tahay in lagu laayo duqeyn aanay iyagu wax war ah ka hayn.
Cumar ayaa waxa uu hadal ay quus ka buuxdo ku caddeeyay in isaga iyo cid kasta oo dadkii meesha lagu laayay ehel u ahaa aanay lahayn awood ay wax uga dhahaan dhacdadaas, waxa keli ah ee ay kari karaanna ay tahay in ay ilaahay ku daayaan.
Laakiin waxa uu rejeeeyay in hadii ay dowladda Soomaaliya arrintaas isku xilsaarto, ay iyadu tahay cidda ka mas’uulka ah dadka la laayay, ayna awoodi karto in ay la xisaabtanto cid kasta oo falkaas ka dambeysay.
Previous: Suudaan: Dhibaato heysata dad Soomaali ah oo la soo ogaaday
Next: FIIRSO Sawiro: Danjire Ameeriko oo arrin lagu farxo ka sameeyey tuulo hoos tagta Balcad